Mateo 21:1-17 NA-TWI | Biblica
Mateo 21:1-17 NA-TWI
Aka kakra na Yesu ne n’asuafo no adu Yerusalem no, wɔbɛnee kurow bi a wɔfrɛ no Betfage a ɛwɔ Ngo Bepɔw no so hɔ no. Ɛhɔ na Yesu somaa n’asuafo no mu baanu sɛ, wonni kan nkɔ.
Ɔka kyerɛɛ wɔn se, “Sɛ mudu hɔ a, mubehu sɛ wɔasa afurum bi ne ne ba hama. Monsan wɔn na momfa wɔn mmrɛ me. Sɛ obi bisa mo se, dɛn na moreyɛ a, monka nkyerɛ onii no se, ‘Wɔn ho hia Awurade’ na asɛm biara remma.”
Wɔyɛɛ eyi hyɛɛ tete nkɔmhyɛ a ɛka se, “Monka nkyerɛ Sion babea se, wo hene reba wo nkyɛn. Odwo, na ɔte afurum ne afurum ba so” no mu den.
Asuafo baanu no yɛɛ nea Yesu ka kyerɛɛ wɔn no. Wɔde mmoa no brɛɛ no no, wɔde wɔn ntama sesɛw afurum no so, maa Yesu tenaa ne so. Nnipadɔm a wɔwɔ hɔ no bi de wɔn ntama sesɛw ɔkwan a ɔde aboa no nam so no so. Ebinom nso bubuu nnubaa, de sesɛw ɔkwan no mu saa ara. Dɔm no tu teɛe, de osebɔ teɛteɛɛm se, “Hosiana, Dawid Ba! Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba no. Hosiana wɔ soro nohɔ!”
Bere a oduu Yerusalem no, kurow no nyinaa bɔɔ twi. Ɛhɔfo no bisae se, “Na hena ni?”
Nnipadɔm no buae se, “Ɛyɛ Yesu, odiyifo a ofi Nasaret a ɛwɔ Galileaman mu no.”
Yesu fii hɔ no, ɔkɔɔ asɔrefi. Oduu hɔ no, ɔpamoo aguadifo a wɔwɔ hɔ no nyinaa kaa sikasesafo apon nyinaa guu fam, bubuu apata a wɔtɔn mmorɔnoma wɔ mu no nyinaa gui.
Yesu ka kyerɛɛ wɔn se, “Kyerɛwsɛm no ka se, ‘M’asɔrefi yɛ beae a wɔbɔ mpae.’ Nanso, mo de, mode hɔ ayɛ akorɔmfo atenae.”
Afei, anifuraefo ne mmubuafo baa ne nkyɛn wɔ asɔrefi hɔ, ma ɔsaa wɔn nyinaa yare. Nanso, bere a asɔfo mpanyin ne Yudafo mpanyin bi huu anwonwade yi, na wɔtee nso sɛ, mmofra nkumaa a wɔwɔ asɔrefi hɔ reteɛteɛm se, “Nhyira nka Dawid Ba no” no, anyɛ wɔn dɛ. Enti, wobisaa Yesu se, “Wote nsɛm a mmofra no reka no anaa?”
Yesu buae se, “Yiw. Na monkenkanee saa Kyerɛwsɛm a ɛka se, ‘Mmotafowa mpo bɛkamfo no’ no da, anaa?”
Afei ofii hɔ san kɔɔ Betania kɔdaa hɔ.
Read More of Mateo 21